कलेजोको मोटोपन कारण र समाधान - Health Today Nepal
कलेजोको मोटोपन कारण र समाधान
January 11th, 2019 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. विकास जैशी,
कलेजोमा बोसो जम्नु कलेजेको मोटोपन हो । कलेजोमा मोटोपन साधारण मानिसमा १ देखि २ प्रतिशत बोसो हुन्छ । कलेजो स–साना कोषहरु मिलेर बनेको हुन्छ । यदि बोसोका कोषहरु ५ प्रतिशत भन्दा बढि कलेजेमा भयो भने त्यसलाई कलेजको मोटोपन भनेर भनिन्छ । कलेजोमा मोटोपन हुने कारणहरुमा मानिस आफै मोटो, हेपाटाइटिस बि.वा. हेपाटाइटिस सि. थाइराइटको रोग भएको, पिल्स लगायत अन्य औषधीको कारणले यो रोग देखिन्छ । यो रोग प्राय भिडियो एक्सरे गर्दा पत्ता लाग्छ वा कलेजोको जाँच गर्दा रगतमा कलेजो बिग्रिएको संकेत जस्तै एल.एफ.टि. मा ए.एस.टि. ९ब्क्त्० वा ए.एल.टि. ९ब्ीत्० बढेको पनि देखिन सक्छ । यो रोगपत्ता लगाउनको लागि हेपाटाइटिस वि.सि. भए नभएको पत्ता लगाउने र रगतको चिल्लो मात्रा हेर्ने, त्यस्तै गरी थाइराईडको जाँच तथा अन्य गर्दा कुनै रोग नभएमा त्यसलाई कलेजोको बोसो वा फ्याट्री लिभर भन्ने गरिन्छ ।
यो रोगको उपचारको लागि ३ भागमा वर्गिकरण गरेको छ । पहिलो समूहमा सामान्य कलेजोको बोसोपन वा फ्याट्री लिभर हो । यसमा कलेजेको संक्रमण हुँदैन । कलेजोको कार्य सामान्य हुन्छ । यस्ता बिरामीले शरिरको तौल घटाउने, चिल्लो खानेकुरा घटाउने, बिहान बेलुका सामान्य व्यायाम गर्ने गर्नुपर्छ । दोश्रो समूहको बिरामीलाई कलेजोको बोसो संक्रमण भएको समूहलाई न्यास भन्ने गरिन्छ । यस्ता बिरामीमा भिडियो एक्सरे गर्दा कलेजोमा बोसोपन देखिन्छ र रगत जाँच गरेर हेर्दा एल.एफ.टि.मा कलेजोको संक्रमण देखिन्छ । यस्तो बिरामीले वजन घटाउने, चिल्लो कम खाने, नियमित व्यायाम गर्ने र भिटामिन ई. जस्ता औषधी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तेश्रो समूहमा कलेजोमा बोसो भरिएर कलेजो कडा भइसकेको अवस्था सिरोसिस भन्ने अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा कलेजो कडा हुनुको साथसाथै फियो सुनिने, पेटमा पानी जम्मा हुने, आँखामा पहेलोपन देखिन सक्छ । यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरी नियमिय उपचार गर्नुका साथ साथै कलेजो फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले कलेजोको बोसोपन एउटा सामान्य अवस्था नभएर कलेजो बिग्रने प्रमुख कारण नै हुन सक्छ । त्यसै कारणले समयमै सचेत भएर यदि कलेजोमा बोसोको मात्रा देखिएमा चिकित्सकको परामर्श लिएर अगाडी बढ्न उचित देखिन्छ ।
( एम.डि.इन्टरनल मेडिसिन डि.एम. हेपाटोलोजी गरेका कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. जैशी विर अस्पताल र काठमाण्डौं भ्याली अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँसंग हेल्थ टुडे नेपालका संवाददाता नमराज भट्ट ले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
Previous article क्यान्सर सर्भाइभर र्‍याम्प सो आज
Next article एपोलो, रोटरी र आईसिएफसीको निःशुल्क सिविरमा २२० को परिक्षण